Myanmar | Westminster Foundation for Democracy
Parliamentary oversight | လွှတ်တော်၏ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်မှု
WFD worked with parliamentary committees to conduct inquiries in respective policy areas, for example, education and health. As part of this work, WFD supported committees in consulting the public and studying best practices from other countries.
လွှတ်တော်ကော်မတီများက ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး အစရှိသည့် အသီးသီးသော မူဝါဒရေးရာနယ်ပယ်များတွင် စုံစမ်းလေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ရာ၌ WFD က ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီများက လူထုနှင့်ဆွေးနွေးတိုင် ပင်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတကာမှ အကောင်းဆုံးကျင့်သုံးမှုစနစ်များကို လေ့လာရာ၌လည်းကောင်း WFD က လုပ်ငန်းစဉ် အစိတ်အပိုင်း တစ်ရပ်အနေဖြင့် ပံ့ပိုးကူညီပေးခဲ့ပါသည်။
Legislation | ဥပဒေပြုခြင်း
WFD delivered comprehensive support to build in-house technical expertise and capacity to create quality legislation. This included, for example, improving the capacity of parliamentary researchers and experts to produce and present information to legislators.
WFD သည် အရည်အသွေးပြည့်ဝသည့် ဥပဒေပြုရေးဖြစ်ပေါ်လာစေရန်အတွက် လွှတ်တော်အတွင်း ပညာရပ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုနှင့် စွမ်းရည်တည်ဆောက် မှုကဏ္ဍများတွင်လည်း ဘက်ပေါင်းစုံမှ ပံ့ပိုးကူညီမှုပေးခဲ့ပါသည်။ သာဓကတစ်ခု အနေဖြင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များထံ သတင်းအချက်အလက် ပြုစုတင်ပြ နိုင်ရန်အတွက် လွှတ်တော်သုတေသနဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ပေးခဲ့ ပါသည်။
Institutional development of Parliament | လွှတ်တော်၏ အင်စတီကျူးရှင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေး
WFD provided wide-ranging assistance to Hluttaw administration to help improve parliamentary services in line with Parliament’s 2019-2022 Strategic Plan.
လွှတ်တော်၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၂ ခုနှစ် မဟာဗျူဟာအစီအစဉ်နှင့်အညီ လွှတ်တော်ဝန် ဆောင်မှုများကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် လွှတ်တော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကို ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် ပံ့ပိုးကူညီပေးခဲ့ပါသည်။
Civil society engagement | အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု
WFD supported civil society groups to improve their engagement with Parliament and its committees withaview to both enhancing the openness of the parliament asawhole and giving citizensavoice in policy and law-making processes.
လွှတ်တော်တစ်ရပ်လုံး ပိုမိုပွင့်လင်းမြင်သာစေရေးနှင့် မူဝါဒလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ဥပဒေပြုရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပြည်သူလူထု၏ အသံပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လွှတ်တော်၊ လွှတ်တော်ကော်မတီများအကြား ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုအား‌ကောင်းလာစေရန် WFD က ပံ့ပိုးကူညီပေးခဲ့ပါသည်။
Strengthening Governance and Accountability in Myanmar (Phase II)